သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုလမျးညှနျနိုငျသောစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးနိယာမဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာနိယာမဟာ Menlo အစီရင်ခံစာမှလာသောကြောင့်လူမှုရေးသုတေသီများမှလျော့နည်းလူသိများဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ Menlo အစီရင်ခံစာဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား၏နိယာမကောင်းတဲ့၏နိယာမအတွက်သွယ်ဝိုက်ကြောင်းစောဒကတက်သည်, သို့သော်လည်းယခင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုက်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။ ကောင်းတဲ့အသင်တန်းသားများကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့အနေဖြင့်အထူးသဖြင့်, ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားအတိအလင်းတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အမြင်ယူနဲ့သူတို့ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဥပဒေထည့်သွင်းရန်သုတေသီများအားပေး။
(1) လိုက်နာမှုနှင့် (2) ပွင့်လင်း-based တာဝန်ခံ: အ Menlo အစီရင်ခံစာများတွင်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားနှစ်ခုကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်။ လေးစားလိုက်နာသုတေသီများသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ, ကန်ထရိုက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်နာခံရန်ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လိုက်နာမှု website တစ်ခုများ၏ content scraping စဉ်းစားနေတဲ့သုတေသီကြောင်းက်ဘ်ဆိုက်၏စည်းကမ်းချက်များ-of-service ကိုသဘောတူညီချက်ဖတ်ပါနှင့်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းဆိုလိုပေသည်။ သို့သော်သူကဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များချိုးဖောက်ခွင့်ရှိရာအခြေအနေများရှိလိမ့်မည် သတိရ, ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားရုံတစျခုလေးယောက်အခြေခံမူဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ကြိမ်, Verizon, AT & T ကနှစ်ဦးစလုံးကသူတို့ကိုဝေဖန်ထံမှဖောက်သည်တားဆီးကြောင်းဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုရှိခဲ့ (Vaccaro et al. 2015) ။ ငါသုတေသီများအလိုအလြောကျထိုကဲ့သို့သောစည်းကမ်းချက်များကို-of-service ကိုသဘောတူညီချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မဖြစ်သင့်မစဉ်းစားကြဘူး။ သုတေသီများအသုံးအနှုန်းများ-of-service ကိုသဘောတူညီချက်များကိုဖောက်ဖျက်လျှင်အကောင်းဆုံးကတော့, သူတို့ (ဥပမာကိုကြည့်ပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်း၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှင်းပြသင့်ပါတယ် Soeller et al. (2016) ပွင့်လင်း-based တာဝန်ခံတို့ကအကြံပြုသည်အတိုင်း,) ။ ဒါပေမဲ့ဒီပွင့်လင်းကဆက်ပြောသည်ဥပဒေရေးရာအန္တရာယ်မှသုတေသီများဖော်ထုတ်မည် ဥပမာအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကွန်ပျူတာလိမ်လည်မှုနှင့်အက်ဥပဒေအလွဲသုံးစားပြုမှုအတွက်အသုံးအနှုန်းများ-of-service ကိုသဘောတူညီချက်များကိုချိုးဖောက်ဖို့ကတရားမဝင်စေ (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) ။ ဒီအကျဉ်းဆွေးနွေးမှုမှာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားချင်လိုက်နာမှုရှုပ်ထွေးမေးခွန်းများကိုမြှင့်နိုင်ပါတယ်အပါအဝင်ဖော်ပြသည်။
လိုက်နာမှုအပြင်, ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားလည်းသုတေသီများက၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုအပေါငျးတို့သအဆင့်မှာမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များ, နည်းလမ်းများနှင့်ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တာဝန်ယူသင့်ကြောင်း, ဆိုလိုတာကင့်လင်းမြင်သာ-based တာဝန်ခံအားပေး။ မြင်သာ-based တာဝန်ယူမှုကိုစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့လျှို့ဝှက်အတွင်းအမှုအရာလုပ်နေတာကနေသုတေသနပြုအသိုင်းအဝိုင်းတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်င့်လင်းမြင်သာ-based တာဝန်ခံကျင့်ဝတ်နှင့်လက်တွေ့နှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အရေးကြီးသောအရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံအတွင်းအများပြည်သူတို့အတွက်ကျယ်ပြန့်အခန်းကဏ္ဍ, နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာစဉ်းစား, ဤသုံးပါးလေ့လာမှုများမှဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား၏နိယာမလျှောက်ထားခြင်းကြောင့်ဥပဒမှကြွလာသောအခါသုတေသီများရင်ဆိုင်ရရှုပ်ထွေးအချို့ကိုဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Grimmelmann (2015) စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်မေရီလန်းပြည်နယ်များတွင်တရားမဝင်ပါပြီစေခြင်းငှါစောဒကတက်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် 2002 ခုနှစ်လွန်မေရီလန်းအိမ်ဘီလ် 917, များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများက Facebook ကိုမှာကောက်ယူကြောင့်စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းမှဘာသာရပ်မဟုတ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် (ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များ၏လွတ်လပ်သောမေရီလန်းအတွက်ကောက်ယူအားလုံးသုတေသနလုပ်ငန်းမှအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းကာကွယ်မှုကိုတိုးချဲ့ အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်သုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေမခံမယူကြောင်း, တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်း) ။ သို့သော်အချို့ပညာရှင်များမေရီလန်းအိမ်ဘီလ် 917 unconstitutional သူ့ဟာသူကြောင်းယုံကြည် (Grimmelmann 2015, 237–38) ။ လူမှုရေးသုတေသီများလေ့ကျင့်တရားသူကြီးတွေမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့်အားလုံး 50 အမေရိကန်ပြည်နယ်များ၏ဥပဒေများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံနားလည်ပြီးအကဲဖြတ်ရန်တပ်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားရှုပ်ထွေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတွင်ပိုဆိုးနေကြသည်။ Encore ဥပမာ, ဥပဒေရေးရာလိုက်နာမှုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲစေသည်ထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း 170 မှသင်တန်းသားများကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ။ အဆိုပါစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်တုံ့ပြန်ခုနှစ်, သုတေသီများဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုအကြံဉာဏ်ကိုတစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်နှင့်အမှုတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့သုတေသနပြုသတိလစ်တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့အလုပ်၏ Third-party ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုမှအကျိုးပေလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သုံးခုစလုံးလေ့လာမှုများင့်လင်းမြင်သာ-based ်ခံမှုအားဖွင့်, ပညာရေးဂျာနယ်မှာသူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ တကယ်တော့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ပွင့်လင်း access ကို form မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်သုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အများပြည်သူအသိပေး-ပြီးနောက်ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကို- ပတ်သက်. သုတေသန၏ဒီဇိုင်းနှင့်ရလဒ်များကို။ မြင်သာ-based တာဝန်ခံအကဲဖြတ်ရန်တစ်ခုမှာမြန်ဆန်ရေနံစိမ်းလမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်ဖြစ်ပါသည်: ငါ့အသုတေသနလုပျထုံးလုပျနညျးအကြှနျုပျ၏အိမျပွမြို့သတင်းစာများ၏ရှေ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါအဆင်ပြေလိမ့်မလဲ? အဖြေကိုအဘယ်သူမျှမဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ကြောင်းကိုသင်၏သုတေသနဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲများကိုမလိုအပ်စေခြင်းငှါဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား, ကောင်းတဲ့အ, တရားမျှတမှုနှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား: နိဂုံးချုပ်မှာ Belmont အစီရင်ခံစာနှင့် Menlo အစီရင်ခံစာသုတေသနအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုလေးအခြေခံမူတင်ပြသည်။ လက်တွေ့တွင်ဤတရားလေးပါးအခြေခံမူလျှောက်ထားခြင်းအမြဲရိုးမရှိ, ကခက်ခဲ balancing လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ထဲကနေသင်တန်းသားများကို debrief ဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ပါကလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစားခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါကောင်းတဲ့အကစိတ်ပျက်အားလျော့သော်လည်း (အ debriefing ကိုယ်တိုင်ကအန္တရာယ်ပြုနိုင်မည်ဆိုပါက), debriefing အားပေး။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယှဉ်ပြိုင်အခြေခံမူဟန်ချက်ညီရန်မလိုအလျှောက်လမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လေးပါးအခြေခံမူ, trade-off ရှင်းလင်းကူညီဖို့ဒီဇိုင်းများသုတေသနပြောင်းလဲမှုများအကြံပြုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အများပြည်သူသူတို့ရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းရှင်းပြဖို့သုတေသီများကို enable ။